नया खेलाडी उत्पादन हाम्रो पहिलो लक्ष्य - Sabal Post
नया खेलाडी उत्पादन हाम्रो पहिलो लक्ष्य
बुटवलमा आजबाट प्रथम प्रदेश नम्बर पाचस्तरीय मुख्यमन्त्रिकप तथा खुल्ला ब्याडमिन्टन प्रतीयोगीता शुरु हुदै छ । खेलमा मेन्स सिंगल,मेन्स डबल,मेन्स भेट्रान्स र मेन्स खुल्ला गरी ४ बिधामा खेल खेलाइने छ । यसै विषयमा केन्द्रीत रहेर अध्यक्ष रमेशवहादुर थापा संग गरीएको कुराकानी :
प्रतीयोगीता आयोजना गर्नुको मुख्य उदेश्य ?
तपाइलाइ थाहा नै छ बुटवल ब्याडमिन्टन क्लब सक्रिय र पुरानो क्लब हो । २०६० सालमा भवन बनेपनी २०६७ बाट क्लबले आफ्नो गतीबिधीलाइ अगाडी बढाएको हो । हामीले बिशुद्ध नया खेलाडी उत्पादन र खेलको ब्यबसायीकतालाइ मुख्य उदेश्य राखेका छौ ।
बुटवलमा ब्याडमिन्टनका खेलको अबस्था कस्तो छ ?
यो खेलले पछिल्लो समय ठुलो फड्को मारेको छ । बिधालयस्तरदेखी क्लबस्तरसम्मका खेलप्रतीयोगीताले माइलेज पाएको छ । त्यसैले प्रदेश ५ को अस्थायी राजधानी रुपन्देहिमा पुर्वाधारको अभाव बाहेक समग्रमा यो खेलको अबस्था अत्यन्त राम्रो छ ।
क्लबको भावी योजनाबारे पनी बताइदिनुहोस न ?
हामीकहा नियमित खेलहरु सन्चालन भैरहेका छन । बिहानदेखी साझसम्म बिभिन्न टिम र खेलाडीले कबर्डहल भरिभराउ हुन्छ । अव हामीले प्रतीयोगीतालाइ निरन्तरता दिनु र खेलाडीलाइ अझ ब्यबसायीक बनाउदै यहाबाट राष्ट्रिय खेलाडी उत्पादन गर्ने योजना लिएका छौ ।
अनियमितता छानबिन गर्ने अख्तियार बाहेक समानान्तर समीती…
बुरुन्डीमा गोही पाल्ने नजेन्डरा अल्वेयम
विद्यार्थीका लागि एक इन्स्टिच्युटले छुट्यायो २५ लाख…
दुई दशकयताकै ठूलो पानी पर्‍यो अस्ट्रेलियामा
‘भारत’ को प्रचारमा नहिँड्ने तब्बूको घोषणा